Fanadihadian’ny CNIDH tany Antsakabary : tafahoatra ny fanosihosena zon’olombelona nataon’ny polisy | NewsMada
Fanadihadian’ny CNIDH tany Antsakabary : tafahoatra ny fanosihosena zon’olombelona nataon’ny polisy
Par Taratra sur 18/03/2017
Inona ny marina momba ny « Raharaha Antsakabary »? Nanao tatitra ny eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fiarovana ny zon’olombelona (CNIDH). Tena nisy fanosihosena zon’olombelona…
Nisy fanosihosena zon’olombelona ny « Raharaha Antsakabary« , araka ny fanadihadian’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fiarovana ny zon’olombelona (CNIDH).
« Teo aloha ny famonoana polisy roa lahy tamin’ny fomba feno habibiana: notorotoroina ny lohany, notontana vato, norasarasaina na efa maty aza », hoy ny mpampaka-tenin’ny CNIDH, Andriamarohasina Seth, teny 67 ha, omaly.
Manan-janaka mbola kely sy mbola mianatra ireo polisy: ahoana ny zon’ireo zaza? Nisy ny famonoana olona tsy nahy tamin’ny fahamaizan’ny vavitantitra jamba tao an-trano. Teo ny fandoroana trano 487. May tamin’izany ny entam-barotra, vokatra, taratasin’omby, taratasin-tany, fitaovam-piangonana…
Nisy ny fampijaliana olona nataon’ny polisy
Nisy ny fampijaliana olona noterena hitsilany amin’ny tany, hitsahina ny lamosiny, nofelahina, norarahina lakrimozenina… Teo ny fandrobana, fa nisy ny trano novakin’ny polisy ary nosavaina: tsy fantatra na very na may ny vola tamin’izany.
Tao ny fihetsika mamoafady, ny fanalam-baraka olom-boafidy: nasiana rojo vy, nentina dia an-tongotra lavitra, notsindronina loham-basy ny kibony… Na ny nasaina nandohalika, lazaina fa tsy mahazo mijery ireo polisy hoe masoandro. Tao ny fihetsika feno fanambaniana: olona nasaina mandoro ny tranony, nasaina nihinana fotaka…
Mila fikarakarana ireo olona niharam-boina
Mila fikarakarana ireo niharam-pahavoazana. « Ahoana, ohatra, ny amin’ny fianakavian’ireo polisy maty? » hoy ny CNIDH. Eo koa ireo olona may trano… Ahoana ny amin’ny masomboly may? Fokontany dimy amin’ny18 no niharam-pahavoazana ao Antsakabary. Nefa tsy fantatra izay mbola hiseho, raha ratsy ny taom-pamokarana. Ahoana no hiatrehan’ireo mponina ny fiainany? May ny bokin’omby, ny kopian’ny ankizy, ny taratasin-tany…? Misy fepetra hanamorana ny fahazoana izany?
Zava-dehibe ny fihenan’ny tsy fanajana ny zon’olombelona
« Misy milaza fa tsy afa-managadra ny CNIDH, tsy afa-misambotra. Nefa anaovanay fanadihadiana ny trangana tsy fanajana ny zon’olombelona », hoy izy. Anaovan’izy ireo tatitra izany, ampahafantariny ny vahoaka. Efa fandresena ho an’ny vahoaka sy ny CNIDH, rehefa mihena ny tsy fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara.
Mbola maro ny raharaha mila fanadihadiana
Izany karazana fanosihosena zon’olombelona izany ny fiofanana azon’ny polisy… tsy tan-dalàna? Ankoatra ny fanadihadian’ny CNIDH, tsy mila famotorana koa ve izay antony nahatongavan’ireo polisy roa any ambanivohitra lavitra any? Toy izany koa izay tena antony fototra nahatonga ny hoe fitsaram-bahoaka.